"Mistral" - एक ... "Mistral" - विशेषताहरु। रूस नौसेना गर्न "Mistral"
जुन 2011 मा, सेन्ट पीटर्सबर्ग आर्थिक फोरम समयमा, त्यहाँ पूरै रोचक घटनाहरूको नम्बर अनुपम कुरा थियो। दोस्रो विश्व युद्ध पछि पहिलो पटक, रूस को प्रतिनिधि सैन्य उपकरण को आपूर्ति लागि विदेशी कम्पनीहरु मात्रा सम्झौता हस्ताक्षर गरे। यो नौसेना आवश्यकताहरूको ठूलो जहाज, हेलिकप्टर वाहक "Mistral" खरिद भनेर सिकेका थिए। यो घटना विदेशी सहायता बिना, एक अनुभूति, अझै घरेलू जहाज निर्माण उद्यम एक पटक आदेश आफूलाई साथ शासित थियो, र हाम्रो पश्चिमी "मित्र" यस्तो मिसाइल पनडुब्बी जहाजहरू जस्तै, आफ्नो टाउको मा बाल हलचल गर्न थाले कसरी जो देखि समय समयमा कुराहरू के सिके। इच्छा यस प्रकार को जहाज कहाँ प्राप्त गर्छ?
किन "Mistral" सिर्जना
Mistral - एक भू-मध्य हावा, राम्रो चिसो, समय समयमा न्यानो हावा SPOILED र फ्रान्स को लाड प्यार नम्र जलवायु दक्षिण तट blows। यो भेदी नम खुर्सानी आर्कटिक हावा प्रवाह, लामो मर्मान्स्क र सेवेरद्वीन्स्क बासिन्दाहरू accustomed गरिएको छ जो, तर उहाँले बेचैनी चढेर प्रकट नाजुक Gallic noses संग तुलना गर्न सकिन्छ। रूपमा जलवायु, फरक रूपमा धेरै को सैन्य सिद्धान्त फ्रान्स र रूसी संघ। हेलिकप्टर प्रकार "Mistral" मूलतः एक ठूलो जहाज, आत्म-प्रणाली antisubmarine, antiship र antiaircraft रक्षा को वस्तुतः devoid, एक साथी घेरिएको को जंगी जहाजको टोली मात्र कार्य गर्ने क्षमता, अर्थात् छ।
अर्कोतर्फ, यो जो गर्न landings "रिमोट" जस्तै विदेशी किनारा मा रोपिन्छ अनुसार, हालैका दशकहरूमा जहाज निर्माण अवधारणा मा फैशन झल्काउँछ। कुनै पन्ध्र वा बीस किलोमिटर को एक अपेक्षाकृत सुरक्षित दूरी एक शत्रुतापूर्ण सरकार आउने ठूलो जहाज, त्यसपछि विशेष-डुङ्गा नौका लागि जहाज उपकरण सुरु, र तबसम्म विशेष प्रशिक्षित सैनिकहरू संग आघात र परिवहन हेलिकप्टर अगाडि उड, एक bridgehead जफत र प्रदान: यो निम्नानुसार हुन्छ सम्पूर्ण प्रक्रिया चलिरहेको बेला प्रतिरोध। किनारमा शिल्प अवतरण पनि देखिने छैन, र साना transports नभएसम्म, पाठ्यक्रम, भाग, incursions, बादल मडारिरहेको पत्ता लगाउने कुनै हालतमा मा, अप्रत्याशित रूपमा आउँछन्। कि "Mistral" को प्रकार को लागि डिजाइन गरिएको छ जो परिदृश्य, बारेमा। यो जहाज धेरै तलछट, यो आउन सकेन किनारमा नजिक छ। को अग्रिम सेना को समर्थन, उहाँले पनि, यो के गर्न सक्षम थियो त्यो पर्याप्त बन्दुक वा मिसाइलहरु छैन।
जहाज को सुविधाहरू
एक ठूलो उडान डेक कुनै तुरुन्तै स्पष्ट "Mistral" मा एक नजर लिन्छ। यो ठूलो जहाज को सुविधाहरू प्रभावशाली छ। यो 200 मिटर एक लम्बाइ र 22 हजार। टी को एक विस्थापन, तर केवल 18 छलछामको गाँठो एक गति मा समुद्र मार्फत सार्दा सक्षम छ। पाइलटहरूले, लगभग 170 टोली सदस्य सहित चालक। सबै माथि, बीच विमान वाहक जहाज फरक, कि छ, डेक र अन्तर्गत-डेक हैंगर, यो अन्य सुविधाहरू छ। उदाहरणका लागि, चालीस आधुनिक ट्यांक को परिवहन को लागि एक खण्ड। "Mistral" - एक विमान वाहक, तर पहिलो र मुख्य यसलाई amphibious आक्रमण जहाजको।
तर एक शत्रुतापूर्ण देश को तट गर्न ल्याउन एक सानो भएको ट्यांक, तिनीहरू अझै पनि देशमा छुटकारा र किनारमा मा माल सामान उतार्नु पर्छ। यो अन्त गर्न, यो एक प्रविधि प्रदान गर्दछ। यो हाम्रो ठूलो अवतरण जहाज (BDK) बस, समुद्र तट मा नाक भाग विरुद्ध आराम र्याम्प खोल्न र छ "मातृभूमि लागि फर्वार्ड!"। सेना नाटो देशहरूमा , फरक कार्य धेरै छली। तर पछि यो।
विंग युद्ध गस्ती मा हल गर्न कार्य निर्भर पूरा भएको छ। डेक र हैंगर मा हेलिकप्टर अनुपात ASW, ड्रम र परिवहन एअर फरक ज्यामितीय आयाम आधारमा, 32 16 समायोजित गर्न सक्छन्।
450 मरीन - यो महत्त्वपूर्ण जो बोर्ड मा जहाज लिन्छ, जनशक्ति संख्या पनि छ। यो battalion।
एक अस्थायी अस्पताल मा पोत को सम्भव र जरुरी refurbishment। यो मानवीय कार्यहरू वा लड मा घाइते सैनिकहरु गर्न चिकित्सा हेरविचार को प्रावधान सुलझाने लागि आवश्यक हुन सक्छ।
र "Mistral" - लामो hikes लागि डिजाइन एक जहाज। यसको स्वायत्त दायरा - 20 हजार किलोमिटर। यो भूमध्यरेखा को आधा छ। तपाईं विद्रोही colonies मा आदेश बहाल गर्न आवश्यक छ भने, यो - तपाईं के आवश्यक छ। तर रूस "Mistral", अझै किन छ को प्रश्न उनको टाउको तोड्न। विदेशी, हाम्रो देश गर्दैन। कहीं अष्ट्रेलिया वा अर्जेन्टिनामा सेना अवतरण कुनै योजना जस्तो देखिन्छ, र त्यहाँ यस्तो इच्छा थियो पनि भने, जहाजहरू ... दुई, वा चार किन्न साथै, अवतरण प्रक्रिया नै धेरै मूल छ हुनेछ।
फ्रान्सेली मा लैंडिंग कसरी छ
पहिले नै बीस, उल्लेख रूपमा फ्रान्सेली "Mistral", आफ्नो पक्षमा लायक छ Nautical माइल जहाँ यो के हुन सक्छ खाली छ तातो समुद्र तट देखि, र, आफ्नो गर्भमा विशेष नौका देखि उत्पादन जो मा हतियार खडा। यो प्रक्रिया को लागि, यो बारी मा भने वाहन जन्म दिन जो आफ्नो ट्यांक र Armored कार मा लोड, त्यसपछि आसपास समुद्र को स्तर संसारमा बाढी र मात्र पछि तिनीहरूले आमा जहाज छोड्ने छ एक निश्चित डक, छ। अवतरण प्रक्रिया हदसम्म र एक लामो समय को लागि, धेरै घण्टा छ। हाम्रो स्टाफ चार दर्जन कार मा - एक प्रबलित ट्यांक battalion, तीन कम्पनीहरु र कमान्डर गरेको एकाइ हुन्छन् जो, कि एकदम बिट छ। हामी निर्धक्क भई भनेर उहाँले Anapa नजिकै कहीं भूमि प्रयास किनभने कसैले हामीलाई शत्रुतापूर्ण हो भने, जटिल तटीय सुरक्षा "Bastion" यो छिटो रोक्न भन्न सक्नुहुन्छ ...
फ्रान्सेली आफ्नो rotorcraft छ। तिनीहरूले उद्देश्य मा एक डेक रूपमा प्रयोग गरिन्छ दुई जो कक्षाहरू, विभाजित छौं। आफ्नो आकार र तिनीहरूले आँधीबेहरी, पानी समुद्र स्प्रे विरुद्ध lodge र निवारक मर्मतका परीक्षण जहाँ पकड, मा उडान डेक गर्न उपकरण सार्दा र फिर्ता गणना उठाने उपकरण अन्तर्गत, बहु-राजमार्ग-ड्रम 90 र "टाइगर्स" लगभग बराबर साझेदारी भाग हो। 13 टन, को कडी मा एक, wheelhouse गर्न अन्य अर्को एक उठाने क्षमता संग बस दुई लिफ्टहरु।
मुख्य डेक हेलिकप्टर हामी विरोधी Ka-27m र Ka-226, तर जमीन र समुद्र लक्ष्य विरुद्ध हडताल लागि आवश्यक छ र "गोही" Ka-52। यी मिसिन को आयाम ठूलो बाटो मा फ्रान्सेली समकक्षों फरक, यसबाहेक। आवश्यक समायोजन संग, रूसी नौसेना लागि निर्मित "Mistral"।
फ्रान्सेली नितान्त कारोबार। रूसी पक्ष आयात दस्तावेज प्रयोग यसको आफ्नै पोत मा चार योजना हेलिकप्टर तीन को निर्माण मा जिद्दी। सहमत आधा। साथै, पिछाडी भाग बाल्टिक शिपयार्ड जहाज निर्माण उद्योग, जो पनि परियोजना को मूल्य कम मा निर्मित थियो। विशेष टिप्पणी को स्टेटनाजायर मा अन्तिम विधानसभा समयमा घरेलू shipbuilders र पूर्ण डकिंग सबै बिन्दुहरुको उच्च गुणस्तरको छ।
अवस्था मा तुरुन्तै फ्रान्सेली पक्ष उच्च-टेक नेविगेशन उपकरण को रूस गर्न "Mistral" मा सेट हुनेछ, र हतियार अन्तर्गत माउन्ट मंच तयार र केबल संचार प्रशस्त गर्न सहमत भएको थियो। सबै मिसाइल र तोप प्रणाली, रूस आफैलाई र आफ्नो गर्नेछन्।
करार को साइन महत्त्वपूर्ण कारक पाठ्यक्रम, फ्रान्सेली सिक्न धेरै छ, जबसम्म, जहाज निर्माण को नवीनतम प्रविधिहरू मास्टर मौका बन्न सक्छ। तिनीहरूले मुख्य रूप, ठूलो भवन को विधानसभा विधि सम्बन्धित हुनत बाल्टिक प्लान्ट र संयुक्त जहज निगम तुरुन्तै लागि आदेश प्राप्त परमाणु icebreakers, को "Mistral" भन्दा कम जटिल छैन। दुई युद्धपोत लागत 1.2-1.5 अर्ब यूरो, प्लस रूसी shipbuilders प्रदर्शन थियो कि कामको लागि 2.5 अरब rubles थियो।
हतियार प्रणाली र चेतावनी
एक फ्रान्सेली "Thales" - मुख्य राडार भएको आफ्नो "आँखा" हुन जो रूस गर्न "Mistral", मा माउन्ट। शरीर को डिजाइन सुविधाहरू गाह्रो घरेलू समकक्षों स्थापना गर्न गरे।
रक्षात्मक प्रणाली को मूल paucity संग जहाज लैस थप आवश्यकताहरु नौसेना आदेश कारण पाँच सैम "ईगल" को प्रयोग र कम उडान उच्च गतिको लक्ष्य नष्ट गर्न छ-barreled तीव्र-आगो तोप एकाइहरूको एक जोडी एके-630 30 मिमी कैलिबर लागि डिजाइन "लचिलो"। Antiship सुरक्षा सुपरसोनिक क्रूज "काम" र किनारमा लक्ष्य सक्षम मिसाइलहरु को परिसर प्रदान गरिएको छ। ASW सबै सम्भव हार्डवेयर सोनार निर्देशन समावेश छ।
विवरण retrofitting व्यापक छैन disclosed गरिएको छ, तर हामी हरेक रूसी "Mistral" थाहा - जहाज को व्यवस्थापन, बस एक हेलिकप्टर र amphibious वाहन, त्यसैले सूचना प्रविधि मा-बोर्ड कम्प्युटर सिस्टम को संतृप्ति पनि छ भन्दा धेरै गम्भीर।
हेलिकप्टर प्रकार "Mistral" - एक ठूलो जहाज, ठूलो-क्षमता र सन्तुलन खाँचो अन्तर्गत गंभीर आँधीबेहरी को अवस्था यसको स्थिरता सुनिश्चित। तीन जहाज सेवा थियो , फ्रान्सेली नौसेना को सुसज्जित नार्वेजियन उत्पादन «L3Marin», शेष लागि जिम्मेवार छ, जो को एक स्वचालित प्रणाली संग। यो रूसी कोर्ट फ्रान्सेली balancer, एक अधिक प्रकाश corvettes र frigates मा परीक्षण, ग्राहक को आपत्ति कारण लागि निर्मित प्रतिस्थापन गर्न इरादा। यसबाहेक, "Rosoboronexport" यो प्रणालीमा प्रत्यक्ष चासो, बित्तिकै करार यति महंगा छ रूपमा छ। रूसी हेलिकप्टर नेभिगेसन सुरक्षा उनको बचत गर्न निकै महत्वपूर्ण छ।
जहाज शटल वाहन को म्यानिङ समस्याको। सुरुदेखि फ्रान्सेली डबल-Hulled catamarans डुङ्गा अस्वीकार गरिएको छ, र घरेलू उच्च गतिको परिवहन एक हावा तकिया को कार्गो पकड मा राखिएको छैन। हामी सबै भन्दा राम्रो समाधान अझै पनि क्रमशः 45 र 26 मीटर को एक लम्बाइ भएको, घरेलू ट्यांक-अवतरण शिल्प "Dugong" र "साबर" खरीद भनेर सहमत भए।
को ठेकेदार नयाँ जहाज को प्रयोग गर्ने सम्भावित क्षेत्रको आधारमा क्रम प्राप्त गरेको छ रूपमा उच्च र बरफ वर्ग hull। आफ्नो फ्रान्सेली समकक्षों नभई जिम्मेवारी आफ्नो क्षेत्र ट्रपिकल पानी गर्न सीमित छैन, र पोर्ट मा, उदाहरणका लागि, पेट्रोपाभ्लोस्क-Kamchatsky धेरै ठण्डा छ। सोही, करार को साइनिङ को समयमा रूसी नौसेना आदेश आधारित हेलिकप्टर जहाँ हुन बारेमा निश्चित थियो। पछि निर्णय गरे।
अपरेटिङ हेलिकप्टर अनुभव
सोभियत नौसेना पहिले नै सेवामा थियो ठूलो विमान-पूरा antisubmarine cruiser - "Leningrad" र "मास्को"। युद्धपोत को हेलिकप्टर विंग सम्भावित शत्रु पनडुब्बी जहाजहरू पत्ता लगाउन अभिप्रेरित। अप्रचलन र प्राविधिक वेयर र आंसू पछि, तिनीहरूले नौसेना कर्मचारी बाहिर, त्यसैले, उत्पादन र प्रयोग दुवै धेरै सस्ता थिए सामान्य तिनीहरूले छैन Bod कम विस्थापन भन्दा धेरै राम्रो र थिए किनभने उनलाई, छैन योजना छ प्रतिस्थापन। अप्रचलन र आधुनिक हेलिकप्टर रूपान्तरणको hangars को impossibility प्रतिबिम्बित थियो परिमार्जन लागि कम क्षमता को योगदान गरे। सामान्य मा, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, तिनीहरूले, एक आरक्षित निर्माण गर्नुपर्छ नियन्त्रण प्रणाली, हतियार, संचार, नेभिगेसन र पत्ता लगाउने सुधार को प्रक्रिया मा retrofitting को संभावना संग विमान वाहक सुरक्षित लायक छैनन् भनेर देखाउँछ। यस मामला मा, महंगा जहाज दशक सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म हेलिकप्टर वाहक "Mistral" को प्रकार यो मापदण्ड, ठूलो प्रश्न गर्न पत्राचार रूपमा।
यसको डिजाइन मा "एडमिरल Kuznetsov" "Mistral" पर्याय छैन। यो जहाज ल्याण्डिङ लागि धेरै फरक कार्य, शक्ति वहन र एक पूर्ण विभिन्न सवारी विशेषताहरु हुन हुँदैन।
पहिले नै मुख्य सुदूर पूर्वी सैन्य बन्दरगाह नयाँ रूसी हेलिकप्टर "Mistral" द्वारा डिजाइन वाहक "भ्लाडिभास्तोक", basing को ठाउँ बन्दछ भन्ने घोषणा गरिएको छ रूपमा जहाजहरू, अझै पूरा भएको छैन गरिएको। यो समाचार कर्तव्य चासो जापान को सरकार कारण, प्रशान्त बेडा केही आक्रामक मनसाय को संरचना बलियो बनाउन uglyadevshego। निस्सन्देह, हाम्रो पूर्वी छिमेकीलाई को कूटनीतिक Maneuvers अत्यन्तै राजनीतिक उत्प्रेरणा हो र अर्को चुनाव को पूर्वसन्ध्या मा, समय समयमा खडा छ प्रश्न जो को "उत्तरी क्षेत्र", गर्न समग्र दावी अनुपात मा फिट। रूसी नौसेना पैदल होक्काइडो को टापुमा कतै एक ट्यांक battalion भूमि केही घण्टा हुनेछ मान, छैन पनि सबैभन्दा साहसी देशभक्ति जापानी कल्पना हो। फोटो "Mistral" प्रभावशाली देखिन्छ, तर पनि मिसाइल cruiser मा जहाज क्रूज मिसाइलहरु को उपकरण पछि, उहाँले सक्रिय छैन, धेरै चिप्ले कीरा, र सामान्य मा, क्रममा, उहाँले निर्माण र बेचिएको छैन। र के को लागि?
Serdyukov सैन्य विशेषज्ञ
यो के हो र किन र किन बारेमा सोध्न बुद्धिमानी हो। पूर्व रक्षा मन्त्री एई Serdyukov रणनीतिक मामिलामा, स्पष्ट, सानो थाह थियो। उहाँले प्राकृतिक artistry संग उपहार थियो भन्दा टाढा धनी (को पाठ्यक्रम, यो एकदम राम्रो फिलिम निर्देशक को makings छ)। सायद त्यो रूपमा समुद्रहरू मा हेर्न र अन्तर्गत विशाल परिवहन र अवतरण शिल्प खतरा हुनेछ, एक पटक सपना देख्यो सेन्ट एन्ड्रयू को झण्डा। र कलात्मक योग्य बाहेक, श्री Serdiukov स्पष्ट केही व्यावसायिक पकड possesses। तर यो केवल अनुमान छ।
एक "Mistral" रूसी सरकार गरिरहेका को भ्रम पहिचान, यो, सम्भव बस त्यसभन्दा असहज छ। दुई जहाज ( "Sevastopol" र "भ्लाडिभास्तोक") पहिले नै, यो नौसेना को आदेश स्वीकार, र आफ्नो uselessness रूसी पक्ष अर्को जोडी को निर्माण वस्तुतः इन्कार भन्ने तथ्यलाई द्वारा पक्षमा, यो बारेमा प्रत्यक्ष हालसम्म व्यक्त गरिएको छ हुनत कल्पित गर्न सकिन्छ। बस प्रतीक्षा गर्ने निर्णय गरे।
ठीक छ, वास्तव मा, केही भयो। amphibious जहाज Vertoletonesuschie डक प्रकार सम्पूर्ण रूसी सैन्य सिद्धान्त अनुरूप छ, तर समय समयमा त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय जटिलताहरू पहिले विकसित नजिकिंदै मलाई जानुहुन्न जो। यस्तो बारेमा अदालत तिनीहरू भनेर भन्न सकिन्छ "मामला मा सुरक्षित पक्ष मा।"
युद्धपोत पैसा खर्च हुन्छ, यो सबै भन्दा राम्रो तरिका मा गरेको छैन, तर तपाईं peacekeeping सञ्चालन, जो, हालका महिना को घटना, यो एकदम संभावना छ मा हेलिकप्टर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
डोनटहरू बनाउन को लागि उपकरण को विशेषताहरु। सबै भन्दा राम्रो डोनट मिसिन के हो
घरेलू पानी अपकेंद्र पंप: बजार को अवलोकन र मूल्यांकन निर्माताहरु मा
फर्नीचर उत्पादन उपकरण लागि मिसिन को चयन: Woodworking उपकरण
दबाव गेज: कार्य प्रकार र प्रकार को सिद्धान्त। एक अंतर दबाव नापने को यंत्र कसरी चयन गर्न
कम्पनीहरु को कराधान - इष्टतम समाधान को लागि खोज
बाजको टाउको को मिश्रको आँखा
FESCO: इतिहास र आज
प्ले "आंधी" NA सिर्जना को इतिहास Ostrovsky
VALERY Gavrilin: जीवनी, फोटो, रचनात्मक
एडलर गरेको सर्वश्रेष्ठ रिसोर्ट्स - फोटो र समीक्षा